မဟာပြိုင်ဘက်ကို ဂိုးပြတ်ချေမှုန်းကာ အမှတ်ပေးဇယားထိပ်ကို တက်လာခဲ့တဲ့…လီဗာပူး ၄-၀ မန်ယူနိုက်တက် ပွဲစဉ်မှ ထူးထူးခြားခြား ပြောစရာများ - xyznews.co
မဟာပြိုင်ဘက်ကို ဂိုးပြတ်ချေမှုန်းကာ အမှတ်ပေးဇယားထိပ်ကို တက်လာခဲ့တဲ့…လီဗာပူး ၄-၀ မန်ယူနိုက်တက် ပွဲစဉ်မှ ထူးထူးခြားခြား ပြောစရာများ
လီဗာပူးဟာ မနေ့ညက မန်ယူနိုက်တက်ကို ဂိုးပြတ်အနိုင်ယူကာ အမှတ်ပေးဇယားထိပ်ကို တက်လာခဲ့ပြီး မဟာပြိုင်ဘက်ကိုတော့ ၎င်းတို့နဲ့ ဘယ်လောက်တောင် ကွာဟနေသလဲ ဆိုတာကို ပြသသွားခဲ့ပါတယ်။ ပထမပိုင်း တစ်ပိုင်းလုံး မန်ယူနိုက်တက်ကို အပြတ်အသတ် လွှမ်းမိုး ကစားခဲ့တဲ့ လီဗာပူး အတွက် ဒီယက်ဟာ ပွဲအစ ၅ မိနစ်မှာတင် ဂိုးသွင်းယူပေးခဲ့ပြီး ပွဲချိန် ၂၂ မိနစ်မှာ ဆာလားက ဂိုးသွင်းခဲ့တာကြောင့် ပထမပိုင်းမှာ ၂-၀ နဲ့ ဦးဆောင်ထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ဒုတိယပိုင်းမှာ လီဗာပူးရဲ့ အနည်းငယ် ကစားပုံ လျော့တိလျော့ရဲ ဖြစ်ခဲ့မှုကြောင့် မန်ယူနိုက်တက်တို့ အနည်းငယ် မျှော်လင့်ချက် ရှိလာခဲ့ပေမယ့်လည်း မာနေးရဲ့ သွင်းဂိုးပြီးနောက် ပွဲဟာ ပထမပိုင်းလို ပြန်ဖြစ်သွားခဲ့ပြီး အရှိန်အဟုန် ပြန်ရသွားခဲ့တဲ့ လီဗာပူး အတွက် ဆာလားက အပိတ်ဂိုး သွင်းယူကာ ၄-၀ နဲ့ နိုင်စေခဲ့ပါတယ်။ လက်ရှိမှာတော့ ယနေ့ညမှာ ကစားရမယ့် မန်စီးတီးရဲ့ ပွဲကို စောင့်ကြည့်နေကြမှာ ဖြစ်ပြီး ပြင်းထန်တဲ့ title race ကနေ စတင်နေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပွဲစဉ်မှ ထူးထူးခြားခြား ပြောစရာတွေကတော့
အိုးထရပ်ဖို့ဒ်မှာ လီဗာပူးကို ဂိုးပြတ်ရှုံးနိမ့်ခဲ့တုန်းက alarm bell တွေ မြည်နေခဲ့ပေမယ့် ဒီရှုံးနိမ့်မှုကတော့ ဒီထက်တောင် ပိုဆိုးရွားခဲ့ပါတယ်။ ဒီနှစ်သင်းကြား ကွာဟမှုဟာ ဒီရာသီအစမှာ တွေ့ခဲ့တဲ့ ပွဲစဉ်ကနေ စတင်ကာ ဆက်လက် ကြီးမားလျက် ရှိနေပြီး ယူနိုက်တက်ရဲ့ အားနည်းချက်တွေကို လီဗာပူးတို့ ကောင်းစွာ အသုံးချခဲ့ပါတယ်။ လီဗာပူးဟာ တားမရဆီးမရ ဖြစ်နေခဲ့ပြီး မန်ယူနိုက်တက် ကတော့ တကယ့်ကို ဆိုးရွားတဲ့ အနေအထားမှာ ရှိနေပြီး ကစားပုံ စိတ်ဓာတ် ခံယူချက်တွေဟာ မေးခွန်းထုတ်စရာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလိုပုံစံနဲ့ ရှုံးန်ိမ့်ခဲ့မှုအတွက် ကစားသမားဟောင်း ဖြစ်ကြတဲ့ နဗီး နဲ့ ရွိုင်ကိန်း တို့ကတော့ ထုံးစံအတိုင်း ပြစ်တင်ဝေဖန်ကြအုံးမှာ ဖြစ်ပြီး ယူနိုက်တက် ကစားသမားတွေ ကတော့ ဒီရာသီ အမြန်ဆုံး ကုန်ဆုံးဖို့ကိုသာ စိတ်စောနေကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပွဲစဉ်အပြီး ဆွေးနွေးသွားမယ့် အကြောင်းအရာတွေ ကတော့ အောက်တိုဘာလက ၅-၀ ပွဲတုန်းကလိုမျိုးပဲ ဖြစ်နေအုံးမှာပါ။
၂~လီဗာပူးရဲ့ အိမ်မက်တွေအတွက် အဓိကကျမယ့် တီယာဂို
နောက်ထပ် ကမ္ဘာ့အဆင့် စွမ်းဆောင်ရည်ကို ထပ်မံ ပြသကာ တီယာဂိုဟာ လူတွေ အားလုံး သိထားခဲ့ကြတဲ့ တီယာဂို ဆိုတာကို အတည်ပြုပေးခဲ့ပါတယ်။ လီဗာပူး ကစားသမားဘ၀အတွင်း ဒဏ်ရာပြသနာတွေ ကိုဗစ်တွေနဲ့ အတက်အကျတွေ များခဲ့ပေမယ့်လည်း လက်ရှိမှာတော့ တီယာဂိုဟာ သူ ဘယ်လို ကစားသမားလဲ ဆိုတာကို အပတ်တိုင်း ပြသနေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းက မန်စီးတီးနဲ့ ပွဲစဉ်မှာ အကောင်းဆုံး ခြေစွမ်းကို ပြသခဲ့တဲ့ တီယာဂိုဟာ ဒီပွဲစဉ်မှာလည်း ကွင်းလယ်ကနေ ပွဲကို လွှမ်းမိုး ကစားသွားခဲ့ပြီး ၎င်းရဲ့ လှပတဲ့ pass တွေ ၊ ဘောလုံးဖြန့်ဝေမှုတွေဟာ တကယ့်ကို ကြည့်လို့ ကောင်းလှပါတယ်။
FSG အနေနဲ့ သူတို့ရဲ့ အပြောင်းအရွေ့ ပေါ်လစီကို ချိုးဖျက်ကာ တီယာဂိုကို ခေါ်ယူခဲ့မှု အတွက် ပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းတွေက သံသယ ဖြစ်ခဲ့မှုတွေဟာ ဒီအချိန်မှာတော့ ကြက်ပျောက်ငှက်ပျောက် ဖြစ်သွားမှာ သေချာနေပါတယ်။ တီယာဂိုဟာ ရာသီရဲ့ အရေးကြီးဆုံး အချိန်မှာ ဒီလိုမျိုး အကောင်းဆုံး ပုံစံကို ပြသနေတာ ဖြစ်ပြီး လီဗာပူးရဲ့ ဖလားအိမ်မက်တွေ အတွက် အရေးကြီးဆုံးလူ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
၃~ပေါ့ဘာရဲ့ နောက်ဆုံး ပွဲစဉ်လား?
ဒီပွဲစဉ်ဟာ ယူနိုက်တက် အကျီနဲ့ ပေါ့ဘာ နောက်ဆုံး ကစားခဲ့တဲ့ မိနစ်တွေ ဖြစ်လာဖို့ ရှိနေပြီး ပြင်သစ် ကွင်းလယ်လူဟာ ပွဲချိန် ၁၀ မိနစ်မှာပဲ ကြွက်သားဒဏ်ရာကြောင့် လူစားလဲခဲ့ရပါတယ်။ ဒဏ်ရာ အတိမ်အနက်ကို မသိရသေးပေမယ့်လည်း ပေါ့ဘာ အနေနဲ့ ရက်သတ္တပတ်နဲ့ချီကာ အနားယူသွားရနိုင်ပါတယ်။ ပေါ့ဘာဟာ ရာသီကုန်မှာ ယူနိုက်တက်နဲ့ စာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးမှာ ဖြစ်ပြီး အိုးထရပ်ဖို့ဒ် ကလပ်နဲ့ စာချုပ်သစ် မချုပ်ဘဲ လမ်းခွဲသွားဖို့က ရာခိုင်နှုန်း များပြားနေပါတယ်။
မန်ယူနိုက်တက်ဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ ၆ နှစ်က ကမ္ဘာ့ဖလားဆုရှင်အတွက် ပေါင် ၈၉ သန်းထိ သုံးစွဲခဲ့ရပေမယ့်လည်း ၎င်းရဲ့ မန်ယူနိုက်တက် ကစားသမား ဘ၀ကနေ ထင်ထားသလို ဖြစ်မလာခဲ့ကာ အိုးထရပ်ဖို့ဒ်မှာ ဖလား ၃ လုံးသာ ရခဲ့ပြီး နောက်ဆုံးဆုဖလားက ၂၀၁၇ ခုနှစ်က ဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းရဲ့ အနာဂတ်နဲ့ ပက်သက်တဲ့ သတင်းတွေကတော့ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကတည်းက ထွက်ပေါ်နေခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး ယူနိုက်တက် ပရိတ်သတ်တွေ အနေနဲ့ အကောင်းဆုံး ပုံစံမှာ ရှိနေတဲ့ ပေါ့ဘာကို ဒီကာလအတွင်း သိပ်ပြီး မမြင်တွေ့ခဲ့ရပါဘူး။
၄~united ဖြစ်ခဲ့တဲ့ အန်ဖီး
လီဗာပူး နဲ့ မန်ယူနိုက်တက် ပရိတ်သတ်တွေ ညီညွှတ်ကြတာကို မြင်တွေ့ရတာဟာ တကယ့်ကို ရှားပါးလှပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အန်ဖီးမှာ ဒီလိုမျိုးကို မြင်တွေ့ခဲ့ရပြီး မာဆေးဆိုက် ပရိတ်သတ် ၅ သောင်းလောက်ဟာ ယူနိုက်တက်ရဲ့ ဂန္တ၀င် ကစားသမား အတွက် လက်ခုပ်တီးပေးခဲ့ကြပါတယ်။ မွေးကင်းစကလေး ၀မ်းနည်းကြေကွဲဖွယ်ရာ ဆုံးရှုံးသွားခဲ့တာကြောင့် ခရစ်စတီယာနိုရော်နယ်ဒိုဟာ ဒီပွဲစဉ်မှာ မန်ယူနိုက်တက် အတွက် ကစားပေးနိုင်ခဲ့ခြင်း မရှိခဲ့ပါဘူး။
ကစားသမားဟာ ဒီသတင်းကို သူ့ရဲ့ ဆိုရှယ်မီဒီယာမှာ တင်ခဲ့ပြီး တစ်ကမ္ဘာလုံးရဲ့ နှစ်သိမ့်မှုတွေကို ခံယူခဲ့ရပါတယ်။ ပွဲချိန် ၇ မိနစ်မှာ အန်ဖီးမှာ ရှိတဲ့ ပရိတ်သတ်တွေ အားလုံးဟာ ဘလွန်းဒီအော ငါးဆုရှင် အတွက် မတ်တပ်ရပ် လက်ခုပ်တီးကာ ညီညွှတ်စွာနဲ့ အားပေး နှစ်သိမ့်ခဲ့ကြပါတယ်။
၅~ဆာလားအတွက် အရေးပါလှတဲ့ ဂိုးများ
ဆာလားဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ပွဲစဉ်တွေမှာ သူ့ရဲ့ ဂိုးသွင်းစွမ်းရည်တွေ ပျောက်နေခဲ့ပေမယ့်လည်း အသင်းအတွက် ကောင်းစွာ အကျိုးပြုနိုင်ဆဲ ဖြစ်ခဲ့ပြီး ကလော့ကတော့ အီဂျစ်စတားကို ဆက်လက် ပွဲထွက်ခွင့် ပေးခဲ့ပါတယ်။ အီဂျစ်အသင်းနဲ့ အတူ ကျရှုံးမှုတွေဟာ ဆာလားရဲ့ စိတ်ဓာတ်ပိုင်းကို ကောင်းစွာ ဒုက္ခပေးခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး သမိုင်း၀င် ရာသီ ဖြစ်လာဖို့ ရှိနေတဲ့ လီဗာပူးရဲ့ အရေးကြီးတဲ့ ကာလမှာ ရာသီအစပိုင်းက ဆာလားရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ဟာ အသင်းကို များစွာ အကူအညီ ဖြစ်စေမှာပါ။
ပြီးခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်တွေက open play ကနေ ဂိုးမရမှုကြောင့် မေးခွန်းထုတ်မှုတွေ ခံရနေတဲ့ ဆာလားဟာ ဒီပွဲစဉ်မှာတော့ ၂ ဂိုးသွင်းယူခဲ့ပြီး ရွှေဖိနပ်ဆု အတွက် ပြိုင်ပွဲမှာ ဆွန်ကို ၅ ဂိုး ဖြတ်ထားခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း ဆာလား အတွက် ကတော့ တစ်ဦးချင်းဆု ဆိုတာ ဒုတိယနေရာမှာ ရှိနေပြီး ဆုဖလားတွေက အရေးကြီးဆုံး ဆိုတာ ကောင်းကောင်း သိနေပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီပွဲစဉ်က သွင်းဂိုးတွေဟာ ယုံကြည်မှုပိုင်းကို များစွာ တိုးတက်လာစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Previous Article လီဗာပူးက လီဗာပူး ဖြစ်ကြောင်း ၊ ယူနိုက်တက် က ယူနိုက်တက် ဖြစ်ကြောင်း ဆက်လက် သက်သေပြခဲ့ကြတဲ့ ပွဲမှာ ဘယ်သူတွေကောင်းပြီး ဘယ်သူတွေ ညံ့ခဲ့ကြသလဲ..
Next Article ယူနိုက်တက် ကို အရှက်တွေပေးပြီး အဆင့် ၁ ယူလိုက်တဲ့ လီဗာပူး ၊ ဗိုလ်လုပွဲ တက်သွားတဲ့ အင်တာ ၊ ဖူလ်ဟမ် တို့ တန်းပြန်တက်လာမှုနဲ့ . . . နံနက်ခင်း အားကစား သတင်းများ